Manje ngiphila emhlabeni, futhi ngiphila phakathi kwabantu. Bonke abantu babona umsebenzi Wami futhi babheke amazwi Ami, futhi kanye nalokhu ngibeka wonke amaqiniso kumlandeli ngamunye Wami ukuze bathole ukuphila Kimi futhi ukuze bathole indlela abazohamba kuyo. Ngoba nginguNkulunkulu, Umniki kuphila. Eminyakeni eminingi yomsebenzi Wami, umuntu wamukele okuningi futhi wanikela ngokuningi, kodwa ngisathi umuntu akakholelwa yini ngeqiniso Kimi. Lokhu kungoba umuntu umane avume ukuthi nginguNkulunkulu ngezindebe zakhe abe angavumelani neqiniso engilikhulumayo futhi, ingasaphathwa eyokwenza iqiniso engidingayo kuye. Lokho kusho ukuthi, umuntu uvuma kuphela ukuba khona kukaNkulunkulu, kodwa hhayi iqiniso; umuntu uvuma kuphela igama likaNkulunkulu, hhayi isiqu Sakhe. Ngenxa yentshiseko yakhe, umuntu uye wangathandeka Kimi. Ngoba umuntu usebenzisa amagama amnandi endlebeni ukuze angikhohlise, futhi akekho ongikhonza ngenhliziyo eneqiniso. Inkulumo yenu inesilingo senyoka; ngaphezu kwalokho, kuwukuzidla ngokwedlulele, isimemezelo sangempela sengelosi enkulu. Okukhulu, ukuthi izenzo zenu zisezingeni lehlazo elimanikiniki neliklebhukile; nezifiso zenu ezingenasizotha kanye nezinjongo ezinobugovu kunzima ukukulalela. Nonke seniphenduke izimvemvane endlini Yami, izinto zokulahlwa engizenyanyayo. Ngoba akekho kini onothando lweqiniso, kodwa kunalokho kukhona kuphela abantu abafuna izibusiso, abafuna ukwenyukela ezulwini futhi babone umbono omuhle kaKristu esebenzisa amandla akhe emhlabeni. Kodwa ingabe nake nacabanga ukuthi abantu abanjengani, abakhohlakele, futhi abangakwazi konke uNkulunkulu ayikho, kungenzeka kanjani ukuthi bafaneleke ukulandela uNkulunkulu? Ningenyukela kanjani ezulwini? Ningafaneleka kanjani ukubona ubuhle benkazimulo, obungakaze bubonwe? Imilomo yenu igcwele amazwi enkohliso nenzondo, ukukhaphela nenkani. Anikaze nikhulume amazwi obuqotho Kimi, noma amazwi angcwele, noma amazwi okulalela izwi Lami lapho nizwa izwi Lami. Ekugcineni, lunjani ukholo lwenu? Izinhliziyo zenu zigcwele izifiso nengcebo, nezingqondo zenu zinezinto zenyama. Nsuku zonke, nibala indlela eningathola ngayo okuthile kimi, nokuthi ungakanani umcebo nezinto zenyama enikuthole Kimi. Nsuku zonke, nilinda nokuthi izibusiso ezengeziwe zehlele kini ukuze nijabulele ngisho izinto eziningi ngisho nezinto, ezingcono, lezo ezijabulisayo. Akumina enimcabangayo ngaso sonke isikhathi, akulona iqiniso elivela Kimi, kodwa kunalokho nicabanga abayeni benu (omkenu), amadodana, amadodakazi, noma ukuthi nizodlani nigqokeni, nokuthi ningayandisa kanjani injabulo yenu futhi niyenze ibe ngcono. Ngisho nalapho ningagcwalisa izisu zenu, anibalulekile yini kakhudlwana kunezidumbu? Ngisho nalapho, emehlweni abantu, nihloba ngezingubo ezinhle kanjalo, anizona yini izidumbu ezihambayo ezingenampilo? Nisebenza kanzima ngenxa yezisu zenu nize nibe mpunga ekhanda, kodwa akekho noyedwa ozimisele ukudela unwele lwakhe olulodwa ngenxa yomsebenzi Wami. Nihlala nihamba njalo, nikhandle umzimba wenu, futhi nicindezele izingqondo zenu ngenxa yenyama yenu, nangenxa yamadodana namadodakazi enu, kodwa akekho noyedwa kinina okhombisa ukukhathazeka noma ukukhathalela intando Yami. Yini lokhu enisafisa ukuyizuza Kimi?
Sengishilo kakade ukuthi labo abangilandelayo baningi kodwa abangithanda ngenhliziyo eneqiniso bayidlanzana. Abanye bangase bathi, “Ukube bengingakuthandi, ingabe bengiyodela okuningi kangaka? Ingabe bengiyokulandela kuze kube manje ukube bengingakuthandi?” Ngempela, ninezizathu eziningi, futhi uthando lwenu, ngempela, lukhulu kakhulu, kodwa okukhulu nakakhulu isiqu sothando lwenu ngami? “Uthando,” njengoba lubizwa kanjalo, lubhekisela emuzweni ohlanzekile futhi ongenabala, lapho usebenzisa khona inhliziyo yakho ukuze uthande, ube nemizwa futhi ucabangele abanye. Othandweni ayikho imibandela, imingcele, kanye negebe. Othandweni azikho izinsolo, inkohliso kanye namanga. Othandweni akukho ukuhwebelana futhi akukho okungcolile. Uma unothando, lokho kusho ukuthi awukhohlisi, awukhonondi, awukhapheli, awuhlubuki, awuthathi noma ufune ukuzuza okuthile noma inani elithile. Uma unothando, uyozinikela ngokuzithandela futhi ubekezelele ubunzima, futhi uyohambisana Nami. Uyodela konke okwakho ngenxa Yami, udele umndeni wakho, ikusasa lakho, ubusha bakho, nomshado wakho. Uma kungenjalo uthando lwakho alulona nhlobo uthando, kodwa luyinkohliso nokukhaphela! Unaluphi uhlobo lothando? Ingabe unothando lweqiniso? Noma olwamanga? Kungakanani osunikele ngakho? Kungakanani osukudelile? Lungakanani uthando engiluthole kini? Ingabe niyazi? Izinhliziyo zenu zigcwele ububi, ukukhaphela nenkohliso, futhi njengoba kunjalo, kungakanani ukungcola okusothandweni lwenu? Ucabanga ukuthi usudele okwanele ngenxa Yami; ukholelwa ukuthi uthando onalo ngami lwanele. Kodwa kungani amazwi nezenzo zakho kuhlale kunokuhlubuka nenkohliso? Niyangilandela, kodwa anilenzi izwi Lami. Ingabe lokhu kubhekwa njengeqiniso? Niyangilandela, kodwa ningibekela eceleni. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa anithembekile Kimi. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa anikwamukeli ukuba khona Kwami. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa aningiphathi njengofanelwe yilokhu engiyikho futhi ngazo zonke izindlela, nenza izinto zibe nzima kimi. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangilandela, kodwa nizama ukungenza isilima ningikhohlisa kuzo zonke izinto. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Niyangikhonza, kodwa aningesabi. Ingabe lokhu nikubheka njengothando? Nimelana Nami kuzo zonke izinto. Ingabe konke lokhu nikubheka njengothando? Nidele okuningi, lokho kuliqiniso, kodwa anikaze nikwenze engikucela kini. Ingabe lokhu kungabhekwa njengothando? Izibalo ezenziwe ngokucophelela zibonisa ukuthi ayikho nencane inhlansi yothando eninayo Ngami ngaphakathi kini. Ngemva kwale minyaka eminingi yomsebenzi namazwi amaningi engiwashilo, kungakanani okutholile? Ingabe akudingi ukuba nibheke emuva ngokucophelela? Ngiyanixwayisa: Labo engibabizayo, yilabo abangonakalisiwe, kodwa labo engibakhethayo yilabo abangithanda ngempela. Ngakho, kufanele nizimisile emazwini nasezenzweni zenu, nihlole izinhloso nemicabango yenu ukuze ningaphambuki endleleni. Kulesi sikhathi sezinsuku zokugcina, yenza okusemandleni akho ukuze ungibonise uthando onalo, uma kungenjalo, intukuthelo Yami ngeke isuke kuwe!
Okwedlule: Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
Okulandelayo: Kufanele Ufune Indlela Yokufanelana NoKristu